माधव पक्षलाई पीएस गुरुङको प्रश्न– सूर्य र एमाले आइसक्यो, अब भागेर कहाँ जाने ? | Samabesi Khabar
माधव पक्षलाई पीएस गुरुङको प्रश्न– सूर्य र एमाले आइसक्यो, अब भागेर कहाँ जाने ?
काठमाडौँ, २२ चैत ।
पोखरा । पार्टी हितविपरित गतिविधि गरेको र सोधेको स्पष्टीकरणसमेत उचित नदिएको भन्दै नेकपा एमालेबाट वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, उपमहासचिव घनश्याम भुसालसहित ४ जना नेता कारबाहीमा परिसकेका छन् । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उनीहरुलाई पार्टी सदस्यसमेत नरहने गरी ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेका छन् ।
पार्टीबाटै कारबाहीमा परेपछि नेपाल पक्षले शनिबारमात्रै देशव्यापी संगठन निर्माण गर्ने अभियान घोषणा गरेको छ । २ महिनामा वडातहसम्मै आफू पक्षीय कमिटी गठन गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
त्यसअघि बिहीबारमात्रै गण्डकी प्रदेशमा नेपाल पक्षले प्रदेशस्तरीय समानान्तर कमिटी गठन गरेको थियो । नेता नेपाल र सुरेन्द्र पाण्डेको उपस्थितिमा भएको अगुवा कार्यकर्ता भेलाले ७५ सदस्यीय समानान्तर जिल्ला कमिटी गठन गरेको थियो । जसको अध्यक्षमा धनराज आचार्य र सचिवमा होमबहादुर नेपाली चुनिएका थिए । सोही दिनको भेलाले प्रदेशस्तरीय समानान्तर कमिटी बनायो । जसको नेतृत्व सुरेन्द्र पाण्डेले गर्नेछन् । सोही भेलाले गण्डकीको १० जिल्लामा आफू पक्षीय नेतृत्वमा जिम्मेवारी पनि बाँडफाँड गरेको थियो ।
केन्द्रमा समानान्तर गतिबिधि गर्ने माधव नेपाल लगायतकालाई नेताहरुलाई अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइरहेका छन् । तर, कारवाही पछि पहिलो प्रदेशस्तरीय समानान्तर कमिटी गठन गण्डकीमै गरेका नेपाल पक्षलाई भने आफू कारबाही नगर्ने मुडमा मुख्यमन्त्री तथा पार्टी इन्चार्ज पृथ्वीसुब्बा गुरुङ छन् । ‘यो पार्टीका लागि अत्यन्तै हानिकारक काम हो । पार्टीको विधिविधानले पार्टीविरुद्ध अर्को पार्टी गठन गर्दै हिँड् भन्छ र ?’ नेकपा एमाले गण्डकी इन्चार्ज तथा मुख्यमन्त्री गुरुङले नेपाल प्रेससँग भने, ‘… कारबाही गर्दिनँ । पार्टीमै समेटेर टिम निर्माण गर्छु । सँगै लिएर जान्छु ।’
नेपाल समूहमा लागेर केही नहुने र बरु कार्यकर्ताको विचल्लीमात्रै हुने भएकाले संस्थापन पक्षमै आउन गुरुङले आग्रहसमेत गरे । ‘सबै साथीहरुलाई, बसिहाल्नु भएको छ भने छाडेर आउनुप¥यो भन्छु । हाम्रोमा कुनै प्रकारको भेदभाव, अन्याय, अत्याचार गरिँदैन । योग्यताअनुसारको काम दिन्छौं,’ उनले भने । यहि परिप्रेक्षमा एमाले गण्डकी प्रदेश इन्चार्ज तथा मुख्यमन्त्री गुरुङसँग गरिएको कुराकानी नेपाल टकमा ।
तुलनात्मक रुपमा हेर्दा गण्डकी प्रदेश तपाईंहरुको राम्रो प्रभाव छ । यही प्रदेशमा आएर नेपाल पक्षले प्रदेशस्तरीय समानान्तर कमिटी नै बनायो । यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
समानान्तर कमिटी गठन गर्दै हिँड्ने पार्टीका लागि यो अत्यन्त गलत र हानिकारक काम हो । किनकी पार्टीका विधि, विधानले पार्टीकै विरुद्ध अर्को पार्टी गठन गर्दै हिँड्, त्यस्तो भन्छ र ?
उहाँले यो काम कसको इशारामा गर्नुभाछ ? किन गर्नुभाछ ? कमिटीको बैठक बोलाउँदा नआउने, अर्को मिटिङ गर्दै बस्ने, समानान्तर कमिटी गठन गर्दै बस्ने ? यसले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेलाई नै कमजोर बनाउने काम गर्छ । यसले धेरै कार्यकर्ताको विचल्ली पनि बनाउनुहुन्छ उहाँहरुले ।
गण्डकीबाट प्रदेशस्तरीय कमिटी गठन सुरु गर्नु भएको छ । कारबाही प्रक्रिया केही हुन्छ ?
म त अहिले कारबाही गर्दिनँ । मलाई के विश्वास छ भने उहाँहरुको समानान्तर कमिटीमा बसेर पनि कसलाई के हुने हो र ? त्यसकारण सबै साथीहरुलाई, बसिहाल्नु भएको छ भने छाडेर आउनुपर्‍यो भन्छु । हाम्रोमा कुनै प्रकारको भेदभाव, अन्याय, अत्याचार गरिँदैन । योग्यताअनुसारको काम दिन्छौं ।
हामीले हिजै निर्णय गरेका छौं । पार्टी एकता हुनेबेलामा एमालेको जुन कमिटी थियो, त्यही कमिटी पुनस्र्थापित गर्छाैं, काम अघि बढाउँछौं भनेका थियौं । यसबीचमा विभिन्न पार्टीबाट आएका व्यक्तिहरुलाई पनि थप्नु छ, थप्छौं । तर, मुख्य आधार भनेको पहिलेकै प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटी, नगर, गाउँ कमिटीहरु त्यही अनुसार नै हुन्छन् ।
सम्भवतः अध्यक्ष र सचिवहरु पहिले जो थिए, तिनैलाई पुनस्र्थापित गर्छौं । अब हामी बस्दैबस्दैनौं भन्नेलाई त के भनौं र ? मिटिङ राख्न भन्छौं । त्यसमा पनि पहिलो पटक आएन, दोस्रो पटक आएन, तेस्रो पटक भने विधानतः पदबाट हटाउने हो । तर, पार्टीबाटै हटाउँदैनौं ।
भनेपछि आफूइतर गतिविधि गर्नेलाई तपाईं कारबाहीको मुडमा हुनुहुन्न ?
होइन म त कारबाही गर्दिनँ । कारबाही गर्ला र भागौंला भन्ने सोच राख्नु भएको होला ! म साथीहरुलाई भागेर जाने स्थिति नै बनाउँदिन नि । पार्टीमै समेटेर टिम निर्माण गर्छु । सँगै लिएर जान्छौं । अरु प्रदेशमा के भएको छ म जान्दिनँ । मेरो प्रदेशमा पार्टीलाई नोक्सान नहोस् भनेर, आन्दोलनलाई नोक्सान नहोस् भनेर अघि बढ्छु ।
साथीहरुले खोजेकै सूर्य चिन्ह थियो, नेकपा एमाले थियो । अहिले दुवै चिज प्राप्त भइसकेको छ । व्यक्ति, व्यक्तिबीचको लडाइँ छोड्नुपर्छ । यो हाम्रो आन्दोलनका लागि हुँदैन । त्यो परिवर्तनका लागि हुँदैन, व्यक्तिका लागि हुन्छ ।
व्यक्तिका लागि त हामीले हिजो पञ्चायतमा लडिसक्यौं नि ! आज आएर किन गर्नुपर्‍यो र ? सबैले पार्टीको पक्षमा, क्रान्तिको पक्षमा, परिवर्तनको पक्षमा लाग्नुपर्छ । नेपाल र नेपाली जनतको पक्षमा लाग्नुपर्छ भन्ने म ठान्छु ।
राप्तीमा ट्याक्टर दुर्घटना अपडेट: चारजनाको मृत्यु
राप्तीमा ट्याक्टर दुर्घटना, एक दर्जनबढी घाइते
चितवनमा म्याजिक दुर्घटनाहुदाँ दुईजनाको मृत्यु ,तिनजना गम्भिर घाइते
चितवनका ट्राफिक प्रहरी प्रमुख भट्टको सरुवा
चितवन निकुञ्जबाट दुई हप्ते केटीको उद्धार
नेपालमा गैँडाको सङ्ख्या ७५२ पुग्यो
ट्याक्टर दुर्घटनामा परि मृत्यु हुनेहरुको पहिचान खुल्यो( नामावली सहित )
ट्याक्टर दुर्घटना अपडेट:थप एकजनाको मृत्यु , मृतकको संख्या ५ पुग्यो
अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले फोटोग्राफी व्यवसायमा समस्या